Mandefa ny zanakay any an-tsekoly izahay mba hianarany lohahevitra isan-karazany ary hifidy ny làlan'ny asa mety. Saingy, ahoana ny amin'ny fanabeazana manerantany, izay tena hanampy azy ireo hiaina eto amin'ity tontolo ity? Eny, izany no zavatra ianaran'ny ankizy tsirairay ao an-tranony… fa ahoana no ampianarina azy ireo?
Rehefa mieritreritra ny hampianatra ny zanakao ianao dia afaka manomboka amin'ilay zavatra iray, izay tsy misy na iza na iza afaka miaina tsy misy… sakafo! Amin'ny andro mahafinaritra dia angataho ny zanakao zatovo ho avy hanampy anao ao an-dakozia ary hampifaly azy ireo ny mahandro sakafo na mety amin'ny hetsika atao any an-dakozia hafa. Amin'izany no hamonoanao vorona roa miaraka amina vato iray - ny zanakao hianatra mahandro sakafo ary hahazo tombony amin'ny fanampiana kely omena azy ireo ao an-dakozia.
Na dia mampianatra azy ireo fahaiza-mahandro aza ianao dia zarao koa ny etikety ao an-dakozia. Saingy, ahoana no hataonao amin'izany? Ireto ambany ireto dia nanonona torohevitra vitsivitsy izahay hanampy anao hampiditra ny zanakao ao an-dakozia sy hanampy anao:
Mandraisa anjara amin'izy ireo
Rehefa nanomboka nampiditra ny zanakao ho any an-dakozia ianao dia aza terena hanery azy ireo hanampy anao amin'ny fikarakarana sakafo. Tadidinao io fehezan-teny hoe "mandresy sy milamina io ny hazakazaka"? Ie, izany no azo ampiharina amin'ny toe-javatra toy izany. Noho izany, rehefa miezaka mampiditra ny zanakao ao an-dakozia ianao dia atombohy amin'ireto hetsika manaraka ireto:
Mitady fomba fahandro
Fitsidihana ny tsenan-tsinjara
Famantarana ny toetoetran'ny legioma sy voankazo
Fandrefesana ny habetsaky ny habetsahana sy ny haben'ny otrikaina
Ataovy ho tompon'andraikitra izy ireo
Eny, ity zavatra mahazatra be ity, mba hahavitana ny sain'ilay zanakao fa satria sambany tao an-dakozia izy ireo, dia mety handoro na hanapaka ny tànany. Aza manahy anefa ary omeo ny baiko an-tanan'izy ireo, ary jereo izy ireo zatra izany andraikitra izany. Angamba azonao atao ny mamela azy ireo hanomboka amin'ny resipeo kely na raha mazoto kokoa momba izany izy ireo, dia avelao izy ireo hanohy amin'ny fomba fahandro tiany. Raha vantany vao nomena fotoana toy izany izy ireo dia tena hiezaka ny hanaporofo ny tsara indrindra vitany amin'ny fandraisana an-tanana ny fanamby.
Omeo valisoa izy ireo
Mirona hiasa mafy kokoa isika rehetra raha toa ka mahazo valiny. Ny fomba anolorana loka ny atleta noho ny asa mafy nataony sy ny fandreseny tamin'ny fifaninanana, toy izany koa na dia tokony hanome zavatra ho an'ny zanakao aza ianao amin'ny famitana ny asany. Ny fahazoana zavatra tsara dia hahatonga azy ireo hieritreritra momba izany mandritra ny tontolo andro ary tena hanantena ny hahazo ny valisoany manaraka izy ireo. Ka isaky ny miditra an-dakozia hanampy anao izy ireo dia lazao azy ireo fa hahazo valisoa lehibe amin'izany izy ireo. Azo antoka fa ho avy hihazakazaka eo aminao izy ireo mangataka izany amin'ny manaraka.
Avadiho ho lasa fahazarana izany
Raha vantany vao hitanao fa miha mahomby amin'ny fikarakarana sakafo ny zanakao dia ampidiro amin'ny hetsika atao ao an-dakozia isan'andro izy ireo. Arakaraky ny fandraisany anjara matetika amin'ny fikarakarana sakafo no mahamaika azy ireo dia ho lasa fahazarana ho azy ireo izany. Aorian'izay dia ho lasa ampahany amin'ny fanaon'izy ireo ny manao ny asan'ny lakozia.
Ankehitriny efa nametraka fitsipika ifotony ianao amin'ny fanatanterahana adidy ao an-dakozia, manome ohatra iray amin'ny fanarahana azy ireo manokana. Raha adidinao ny manomana sakafo hariva amin'ny Alarobia, dia tokony ho azonao antoka fa tsy miala amin'ny fanomezana fialan-tsiny ianao. Amin'izany fomba izany rehefa tonga ny fotoana hampiomanin'ny zanakao sakafo hariva amin'ny alakamisy, dia hanaraka ny dian-tongotrao izy ireo ary hikarakara ny sakafo. Na inona na inona toe-javatra, dia hisy fifehezana hotehirizina ao an-trano hatrany mba hampahafantarana azy ireo ny andraikiny
Tsy hanapaka azy io ny fikarakarana sakafo. Ianao koa dia mila mampianatra ny zanakao ny fomba fanadiovana ny toerana aorian'ny lanin'ny sakafo. Ny fanaovana izany dia hanampy azy ireo hitazona ny fahadiovana tsy ao an-dakozia ihany, fa ao amin'ny trano manontolo koa. Rehefa zatra manadio irery ny korontana izy ireo, dia tsy ho nihazakazaka nanenjika azy ireo ianao, nangataka ny hanao ny fandriany, manadio ireo vera ary manome taratra ilay radiatera mpamorona.
Raha mahay manao ny sakafony manokana ny zanakao dia tsy hihazakazaka hanenjika ny junk izay atao doka isan'andro. Apetrakao amin'ny làlan'ny fomba fiaina salama amin'ny fihinanana sakafo vita an-trano isan'andro koa izy ireo. Ny fampidirana ny zanakao ho any an-dakozia hatramin'ny fahazazany dia tena hanampy azy ireo hanana fahaiza-manao lakozia tsara kokoa.
Ahoana ny fomba hampidirana ny zanakao ao an-dakozia